Folder တွေဖွင့်ရင်မြန်ဆန်အောင် | အိမ့်မှူးသော်
1. အရင်ဆုံး Click Start ပြီးတော့ click Run (Window + R)
2.Run Box ထဲမှာ Regedit ရိုက်လိုက်ပါ။ ပြီးတော့ click OK.
3. ပြီးတော့ ဒီအတိုင်းလေးဆက်သွားလိုက်ပါ။
HKEY_CURRENT_USER\_Control Panel\_Desktop folder.
4. Desktop နေရာမှာ MenuShowDelay file. ကိုရှာလိုက်ပါ။ဖွင့်လိုက်ပါ။
5. သူရဲ့တန်ဖိုးက စက်တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးမတူပါဘူး။ ၄၀၀ ၊ ၁၀၀ ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။
1 လို့ရိုက်ထည့်ပေးပြီး Click OK. နဲ့ ထွက်လိုက်ပါ။
ပြီးရင်စက်ကို restart လုပ်လိုက်ပါ။